Webmail: xulashooyinka aad haysato ee aad gacanta ku hayso | Laga soo bilaabo Linux
Xaqiiqdii waxaad horey u laheyd mid ama kabadan xisaabaadka boostada, laakiin waxaa laga yaabaa inaad xoogaa ku faraxsanayn adeegga ama aad raadineyso adeeg leh astaamo gaar ah. Sidaa darteed, qodobkaan waxaad ka heli doontaa hage wanaagsan oo aad ku ogaan karto wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato adeegyada webmail.
Sidoo kale, waxaad baran doontaa qaar ka mid ah sirta iyo faahfaahinta farsamada adduunka boostada si aad u ogaato sida adeegyadan u shaqeeyaan ama sida aad u kala habeyn karto macaamiishaada ama emaylka emaylka si aad awood ugu yeelatid dirista iyo helitaanka emaylladaada si raaxo leh ...
1 Webmail vs mail macmiil
1.1 Sida loo sameeyo macmiil
1.2 Isticmaal mutt
2 Qaar ka mid ah adeegyada webmail ee caanka ah
3 Sida loo abuuro cinwaanka boostadaada Linux
Webmail vs mail macmiil
Waa inaad ogaataa inaad awoodid dir ama soo dir emayl siyaabo kala duwan. In kasta oo mararka qaarkood farqiga u dhexeeya labadoodaba uu ku xumaado iyada oo la adeegsan karo labadaba adeegyo badan oo emayl hadda ah. Tusaale ahaan, GMAIL, adeegga caanka ah ee Google waxaa loo isticmaali karaa hal dhinac ama mid kale.
Laakiin aan aragno kuwaas hababka qaab faahfaahsan ...
Emailka: waa adeeg email ah oo ku saleysan websaydh. Taasi waa, waxaad ka maamuli kartaa boostadaada shabakada internetka iyo qalab kasta oo leh xiriir internet. Si kale haddii loo dhigo, waa adeeg daruur ku saleysan, iyada oo aan loo baahnayn in barnaamijyo lagu rakibo gudaha ama lagu sameeyo nooc kasta oo qaabeynta ah. Xaaladdan oo kale, farriimaha waxaa lagu keydin doonaa server-ka fog ee ay leedahay shirkadda adeegga bixisa. Taasi waa si sax ah sababta booska keydinta ee farriimaha iyo lifaaqyada loogu talagalay isticmaale kasta uu ku xaddido bixiyaha oo ay ku kala duwanaan karto hal adeeg illaa mid kale.
Macmiilka boostada: Si ka duwan sida kor ku xusan, xaaladdan waxaad u baahan tahay barnaamij lagu rakibo gudaha, ama PC-gaaga ama qalabkaaga mobilada. Tusaale ahaan, waxaad haysataa barnaamijyo sida Mozilla Thunderbird ama Microsoft Outlook, ama barnaamijyada Android sida GMAIL oo kale (ma aha oo keliya kuwa ku habboon adeegga Google, laakiin sidoo kale kuwa kale), Blue Mail, Aqua Mail, iwm. Noqo sida ay dhici karto, xaaladdan sidoo kale waa lagama maarmaan in la isku hagaajiyo xogta marinka macmiilka si ay uga heli karto sanduuqa boostada. Xaqiiqdii, waad iskudubbaridi kartaa si emayllada loogu keydiyo gudaha isla markaana server-ka fogfog loo daadsho (waxaad ka heli kartaa oo keliya emaylladii hore barnaamijka macmiilka) ama sidaa darteed sidoo kale waxay ku kaydsan yihiin server-ka. Xaaladda koowaad, waxaad halis ugu jirtaa in haddii qalabku kaa lumo, uu waxyeello gaaro, ama la tirtiro sabab kasta ha noqotee, mar dambe ma awoodi doontid inaad marin u hesho farriimaha.
Sida loo sameeyo macmiil
Hagaag, marka laga hadlayo macmiilka iimaylka, waa inaad rakibtaa barnaamijka ama barnaamijka oo aad fulisaa qaabeynta lagama maarmaanka ah. Tani waa wax abuuraya shaki badan oo ku saabsan dadka isticmaala khibrada yar. Taasi waa sababta aan u soo bandhigi doono tusaale ahaan qaabeynta adeegga boostada ee 'IONOS' (oo horay u ahayd 1 & 1) oo loo isticmaali karo in lagu habeeyo macaamiisha sida Thunderbird, GMAIL, iwm.
Lo Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ogaato xogta adeegga adeegga boostada inaad haysato, ha noqoto GMAIL, Yahoo !, midka ay IONOS leedahay (ama adeeg kasta oo kale) oo ku siinaya emayl leh cinwaankiisa, iwm. Tusaalahan, aynu ka fikirno inay kuwani yihiin:
Contraseña: password_ka aad_dooratay
Server soo galaya: xogta qaabeynta ee emayllada soo galaya macmiilka.
Magaca Server: tani way kala duwan tahay iyadoo ku xiran adeegga, u raadi midka kiiskaaga gaarka ah. Tusaale ahaan, IONOS waxay ahaan laheyd:
Dekadaha: inta badan waa isku mid inta badan adeegyada, in kastoo qaarkood laga yaabo inay u beddeleen sababo amni darteed si aysan u ahayn kuwa caadiga ah:
Amniga- wuxuu ku jiri karaa qoraal cad, ama lagu xareeyay amniga lagu daray sida SSL / TTL, iwm. Waa inaad naftaada u sheegtaa kiiskaaga gaarka ah. Marka laga hadlayo IONOS, waa STARTTLS.
Server-ka baxaya: xogta qaabeynta soosaarka emaylka macmiilka.
Magaca Server: smtp.ionos.com
kuwa kale: macaamiisha qaar ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan fursado kale oo horumarsan oo aad ka kala dooran karto, ama ku weydiin karaan qaab aqoonsi ama aqoonsi, haddii aad rabto inaad gasho lambarka sirta ah markasta oo aad gasho, haddii aad rabto inaan xusuusto, iwm.
Ilaa hadda wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato adeegga boostadaada. Hadda waxaan tusaale u soo qaadanayaa sida ku samee qaabeynta macaamiisha Thunderbird, laakiin sidoo kale waa lagu dabaqi karaa barnaamijyada kale sida GMAIL, iwm. Way ka badan tahay ama ka yartahay isku mid, kaliya amarka, magacyada xulashooyinka qaarkood, ama meesha xulashooyinka dejintu kala duwanaan doonaan ... Hagaag, talaabooyinku waxay noqon doonaan:
Furan Thunderbird kombiyuutarkaaga ku xiran shabakadda.
Bogga weyn waxaad ku arki doontaa Xisaab samee iyo qayb hoosaad loo yaqaan "Account Account". Halkaas guji.
Hadda daaqad ayaa furan oo ku weydiineysa magacaaga, cinwaanka emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah. Waxa kale oo jira ikhtiyaar aad ku calaamadin karto si ay u xasuusato erayga sirta ah oo aanad u weydiisan markasta oo aad rabto inaad gasho. Si kale haddii loo dhigo, marka laga hadlayo IONOS, waxay noqon laheyd tusaale ahaan: Pepito, info@micorreo.es iyo password_que_hayas_elegido siday u kala horreeyaan. Markaad gasho, riix batoonka si aad u sii wado.
Mar labaad shaashad cusub ayaa u muuqata meesha ay ku weydiineyso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeeggaaga. Waxaad arki doontaa inay jiraan laba sadar, hal wicitaan Soo gal iyo mid kale Dibad baxa. Waxay tixraacayaan xogta serverka imanaya iyo kuwa baxaya ee aan kor ku muujiyay. Kaliya waa inaad ka buuxisaa macluumaadka ku habboon faahfaahinta aan horay u soo bandhigay. By the way, waxaa jira qayb ka mid ah lambarka sirta ah ee kuu oggolaanaya inaad kala doorato Autodetect, Normal (qoraal cad), Encryption, iwm, mabda 'ahaan uga tag sida Auto (haddii uusan shaqeynin dooro encryption), illaa adeeggaagu yahay wax gaar ah iyo isticmaal wax kale. Midka baxa, ikhtiyaarka SMTP horeyba waa loo doortay asal ahaan mana badali kartid, laakiin midka imanaya waxaad kala dooran kartaa IMAP iyo POP3. Xullo midka aad dooratay wuu shaqeyn doonaa, laakiin… maxay farqi u leedahay? Hagaag waan sharixi doonaa:
IMAP: waa maamuus si toos ah ugu shaqeeya serverka. Sidaa darteed, si aad u hubiso emaylka, way ku xirnaan doontaa iyada oo soo bandhigi doonta waxa ku jira. Faa’iidada ayaa ah in e-maylka ay heli karaan dhamaan aaladaha ama macaamiisha aad qaabeysay isbadal walbana uu ka muuqan doono qof walba hadii qalabka macmiilkuna uu dhib haysto e-maylku ma lumayaan. Taasi waa sababta ay u tahay xulashada la door bidaayo. Waxa kaliya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah in haddii aad ka sameysato faylal IMAP aysan ka heli karin POP3.
POP3: waa hab maamuleed ku xira serverka soona degsada dhamaan emailada gudaha. Marka la dhammeeyo, waxay ka saareysaa server-ka, sidaa darteed, ma heli doonaan qalab kale. Waxaad kuheli kartaa oo keliya gudaha, taasi waa, haddii aad rabto inaad dib u hubiso emayl duug ah oo ka socda macmiil kale ama qalab kale, ma awoodi doontid. Haddii wax ku dhacaan qalabkii laga soo dejiyey, waxaad waayi doontaa emayllada. Taasi waa sababta aysan u ahayn xulasho lagu taliyay. Faa'iidada kaliya ee jirta ayaa ah inay uga tagi doonto boos server-ka (laakiin waxay ku dhex jirtaa xusuustaada) waxayna ka hor istaagi doontaa inay buuxiso iyo inaad ka heli karto emaylladaada maxalliga ah adigoon u baahan xiriir ...
Ugu dambeyntii riix Dhameeyay iyo voila, hadda waxay ku tusi doontaa shaashadda ugu weyn sanduuqaaga, sanduuqaaga, qashinka, iwm. Haddii wax walboo hagaagsan yihiin waxaad bilaabi kartaa adeegsiga emaylkaaga macmiilkaaga.
Xaqiiqdii waad horay u ogeyd mutt, waa barnaamij xariijin amar ah oo kuu oggolaanaya inaad emayl ka soo dirto kombiyuutarka Linux. Haddii aad xirmada ka rakibtay kaydinta qalabkaaga, isticmaalkiisa ma aha mid aad u dhib badan.
Macmiilkani wuxuu kaloo u baahan yahay Qalabaynta sida kuwa kale. Laakiin kiiskan waa inaad abuurtaa ama aad tafatirtaa feylka ./muttrc:
Kadib waa inaad sidoo kale abuurtaa galka:
Iyo for dir emaylka iyo lifaaqa, waad isticmaali kartaa amarkan fudud:
Xitaa waxaad ku isticmaali kartaa tan qoraallada ...
Qaar ka mid ah adeegyada webmail ee caanka ah
Markaad ogaatid sida loo kala saaro Webmail iyo emaylka macmiilka, hadda waxaan arki doonaa qaar adeegyada webmail ee la yaqaan (inkasta oo aad sidoo kale u habeyn kartid inay ka soo galaan emayl):
gmail: waa adeegga bilaashka ah ee Google, si fiican loo yaqaan oo si ballaaran loo isticmaalo. Waxay leedahay faa iidada inay ku siiso adeegyo badan oo dheeri ah oo ka socda shirkadan, sida GDrive, inaad awood u yeelatid inaad iswaafajiso xogtaada Android, Kalandarka, Google Docs, iyo inbadan. Xitaa waxay leedahay ikhtiyaarro lacag bixin si loo helo adeegyo dheeri ah oo G Suite ah oo ku habboon kuwa u baahan wax badan, shirkado, iwm. Waxay leedahay ilaa 15 GB oo ah meel lagu keydiyo oo bilaash ah oo lala wadaago adeegyo kale (oo lagu ballaarin karo ikhtiyaarrada lacag bixinta), iyo awood u leh lifaaqyada 25GB (ama 50MB ee ka soo galaya adeegyada kale). Waad diri kartaa cabirro ka ballaaran adoo adeegsanaya xiriiriyaha 'GDrive' ama la wadaagga waxyaabaha ku jira akoonnada kale. Dabcan, waxay taageertaa qaabeynta macmiil ama adeegsiga websaydhka (webmail).
Yahoo!: kani waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan ee la yaqaan. Sida tii hore oo kale, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa qaabeynta macmiilka ama u isticmaal webmail ahaan. Waxay bixisaa 1GB oo ah meel bilaash ah, ama ka badan haddii aad bixiso. Sida ku lifaaqan, waxaad gaari kartaa lifaaqyada sidoo kale waa 25MB.
Dabagalka: waxay ahayd adeeg aad u xiiso badan oo bilaash ah oo softiweer ah (oo ku hoos qoran shatiga GNU GPL) oo lagu qoray PHP. Waxaa loo heli jiray Linux, FreeBSD, macOS, iyo Windows. Adeeggan websaydhka waxaa naqshadeeyay Nathan iyo Luke Ehresmantam, oo raacay heerka HTML 4.0 si loo hagaajiyo iswaafajinta server-yada webka. Waxaa loo qaabeyn karaa macmiil, waxay taageertaa plugins si loo kordhiyo awoodeeda isla markaana loogu daro shaqooyin cusub bartanka barnaamijka, waxaana lagu heli karaa in ka badan 40 luqadood.
Outlook.com: waa adeegga caanka ah ee Microsoft, iyada oo ay suurtagal tahay in labadaba loo adeegsado habka webmail iyo qaabeynta macmiilka. Adeeggan sidoo kale wuxuu la xiriiraa kuwa kale shirkadda, sida Xafiiska, Kalandarka, OneDrive, iwm. Ma aha il furan, in kasta oo ay leedahay qaab bilaash ah (iyo rukumo kale oo lacag la siiyo). Adeegga bilaashka ah waxaad ku leedahay 15GB boos oo koontadaada ah iyo xaddiddadka lifaaqyada waxaad ku leedahay 20MB ama 10MB oo Beddel ah.
FurMailBox: Waxay ahayd adeeg kale oo hadda loo arko inuu bakhtiyey sababo la xiriira dhaqdhaqaaq la’aan sida Dabagalka, marka lagu daro, waxaa jiray dhibaatooyin qaar sannadka 2020 oo horeyba u siinayey tilmaamo waxa dhici doona. Adeeggan websaydhku wuxuu la mid yahay kuwa kale, wuxuu adeegsadaa softiweer bilaash ah wuxuuna u oggolaanayaa la macaamil haddii aad doorbido. Waxay u oggolaatay lifaaqyada illaa 500MB farriin kasta, waxayna lahayd meel bannaan oo 1GB keliya ah. Boggeeda internetka waxaa loo tarjumay Isbaanish, Faransiis, Ingiriis, Talyaani, Irish iyo Boolish.
Zoho: adeeggan kale ayaa sidoo kale loo yaqaan. Qaybteeda bilaashka ah, waxay taageertaa ilaa 25 isticmaaleyaal kala duwan, waxay leedahay shaqooyin qaarkood oo sida caadiga ah lagu bixiyo adeegyada kale, waxayna leedahay qalab iskaashi iyo qalab otomaatig ah oo xiiso leh. Waxaad xad u leedahay lifaaqyada 25MB ee adeegga bilaashka ah ama 30MB ee adeegga lacag bixinta, iyo 5GB xisaabaadka bilaashka ah.
ProtonMail: waa mid ka mid ah adeegyada ugu wanaagsan ee websaydhada (lagula jaanqaadi karo macmiilka), midka ay doorteen shirkado badan oo doorbida in yar oo amni iyo sir ah Xaqiiqdii, waxay leedahay astaamo qaas ah oo qarsoodi ah, iyo fariin qarsoodi ah ilaa dhammaad. Sida booska lagu heli karo qaabkiisa bilaashka ah, wuxuu gaarayaa 500MB iyo xadka maalinlaha ah ee 150 emayl. Sida xadka lifaaqyada, waxay u ogolaaneysaa ugu badnaan 25MB iyo ilaa 100 ku lifaaqan emaylkiiba.
Horde Webmail- Waxay u noqon kartaa xulasho wanaagsan adeegsadayaasha agoonta noqday agoonta SquirrelMail iyo OpenMailBox kadib. Maamulaha boosta ee loogu talagalay websaydhka (waa suurtogal in la isticmaalo macmiil sidoo kale) wuxuu ku qoran yahay PHP, horumariyayaasheeduna waxay abuureen qaab aad u weyn oo leh qalab fara badan oo ku jira farahaaga, laga bilaabo boostada lafteeda, iyada oo loo marayo buugga cinwaanka, qoraalada, iyada oo loo marayo xeerarka shaandhayn, iwm Dhammaantood waxay ku hoos jiraan liisanka LGPL. Waxay ku qoran tahay Isbaanish waana mid aad loo qaabeyn karo.
Sida loo abuuro cinwaanka boostadaada Linux
Waxaa jira dhowr wakiilada wareejinta boostada ama MTAssida Postfix, SendMail, iwm. Iyaga waxaad ku habeyn kartaa server-kaaga boostada si aadan ugu tiirsanaan adeegyadii hore. Tusaale ahaan, si aad ugu qaabeyso Ubuntu adoo adeegsanaya SendMail, waad raaci kartaa talaabooyinkan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Webmail: xulashooyinka aad hayso ee aad gacanta ku hayso
Taliyaha Saqda dhexe 4.8.25 mar horaba waa lasii daayay waana kuwan warkiisu